🥇 ▷ Cusboonaysii Samsung Galaxy J5 (2017) oo loogu talagalay Android 9.0 keega Firmware-ka oo leh interface ah… ✅
Cusboonaysii Samsung Galaxy J5 (2017) oo loogu talagalay Android 9.0 keega Firmware-ka oo leh interface ah…
Adeegsadayaasha leh Samsung Galaxy J5 (2017), tani waa hagida ugu haboon ee lagu casriyeyn karo kan rasmiga ah ee loo yaqaan ‘9. 9. Pie firmware Samsung ayaa ugu dambeyntii siidaayay cusbooneysiinta muddada dheer ee la sugayay ee Android Pie ee loogu talagalay J5 2017 2 sano miisaaniyad balaaran, Galaxy J5 (2017) ugu dambeyntii hadda helaa cusboonaysiinta labaad ee ugu weyn Android. Boodhkii ugu horreeyay wuxuu ka socday Nougat ilaa Oreo iyo hadda, wuxuu ka yimid Oreo illaa Android Pie. Noocan ayaa ah nooca ugu weyn waxaanan kugula talineynaa inaad sida ugu dhakhsaha badan u rakibatto si aad uga faa iideysato Galaxy Q5 (2017).
Ilaa Android Oreo, astaanta ayaa isu bedeshay khibradda Samsung ee TouchWiz. Iyo dhowaan, iyada oo loo yaqaan ‘Android Pie’, Samsung ayaa la timid horumarinno kale oo waaweyn oo loogu magac daray “One UI”. Sida waayo-aragnimada Samsung ama TouchWiz ee la soo dhaafay, One UI waa maaskaro gaar ah oo loogu talagalay Samsung oo ka sarreysa Android. Hal UI, isbeddelada ayaa ugu horayn diiradda lagu saaraa minima waxaana loogu talagalay inay taageeraan adeegsiga hal-gacan ah. Ka sokow adeegsigan cusub ee isticmaalaha, waxaa jira dhowr isbadal oo kale oo ku yimid kor u qaadista qalabka loo yaqaan ‘Android Pie’ oo diyaar u ah in lagu rakibo Samsung sidoo kale. Galaxy Q5 (2017). Kahor intaadan sii wadin rakibaadda, hubi inaad sameyso gurmad buuxa ee xogtaada oo dhan.
Faahfaahinta qalabaynta Android Pie:
Cusboonaysiintaan ayaa ah tan ugu weyn. Soo qaado dib u eegis cusub oo ah Android Pie oo taas la socota, waxay sidoo kale la timid Samsung maqaarkii ugu dambeeyay ee software-ka One UI. Marka la rakibo kadib, waxaad isla markiiba arki kartaa isbeddelada oo dhan.
Macallinkaan firmware-ka ah wuxuu khuseeyaa noocyada kaladuwan ee Galaxy J5 (2017). Nambarada moodeelada gaarka ah ee uu tilmaamayo tusahan ayaa kor lagu taxay.
Si aad u hubiso inaad xaq u leedahay Samsung Galaxy Models / variants J5 (2017), gal Dejinta> Telefoonka ku saabsan> Lambarka Moodeelka.
Waxaad ka heli kartaa soo socda Galaxy J5 (2017) maqaal xiisa leh oo xiisa leh:
Haddii aad qorsheynaysid inaad xididdid taleefankan ama wali jahwareersan tahay, maxaad u xididaysaa? Galaxy J5 (2017), aqriso: Faa’iidooyinka xididka aaladdaada Android.
Samsung Galaxy J5 USB Driver (2017)
Waa inaad ku xiraa taleefankaaga Android kumbuyuutar. Taas awgeed, hubi inaad ku rakibtay darawalka USB-ga Samsung Galaxy J5 (2017) si sax ah. Haddaysan ahayn, waxaad kala soo degsan kartaa darawalka rasmiga ah ee ugu dambeeyay qeybta qeybta ‘USB USB Drivers’ halkan:
Soo dejiso Samsung Galaxy J5 USB Driver (2017)!
Wax walbaa diyaar ma yihiin? Hagaag hadda waad sii wadan kartaa aqrinta hoose iyo cusbooneysiinta Galaxy J5 (2017) ee casriyeynta qalabka rasmiga ah ee loo yaqaan ‘Android Pie firmware’.
Sida loo rakibo Android Pie Galaxy J5 (2017)
Si horay loogu sii socdo, waxaan leenahay talaabo faahfaahsan oo talaabooyin talaabo ah oo aad ku cusbooneysiin karto Samsung Galaxy J5 (2017) ee dhisida Android Pie. Shirkadda firmware-ka waxaa si rasmi ah u saxiixay Samsung waxaanan u isticmaali doonnaa ODIN kii ugu dambeeyay ee aan u isticmaalno Galaxy Q5 (2017).
Macallinkaan waxaa loogu talagalay oo keliya Samsung Galaxy Q5 (2017). Ha ku tijaabin tan telefoonka kale.
Qalabka adag ee loo adeegsaday daabacaadan ayaa ah Samsung siidayn rasmi ah oo loogu talagalay Galaxy Q5 (2017).
Tallaabada 1 – Ka soo dejiso cusboonaysiinta Android Pie ee ku xirka hoose ee faahfaahintaada Galaxy Model J5 (2017) kumbuyuutarkaaga oo soo saar faylka zip.
Tallaabada 2 – Soo dejiso Odin, kaas oo kaa caawin doona inaad ku rakibtid cusboonaysiinta qalabka loo yaqaan ‘Android Pie’ Samsung Galaxy Q5 (2017).
Tallaabada 4 – Hubso inaad haysato Galaxy J5 (2017) darawal USB ah oo lagu rakibay kombiyuutarkaaga.
Haddii aad isticmaaleyso nooc hore oo ODIN ah ama qalab shidan oo aan lahayn qaab file magaca sare ku xusan, fadlan tixraac soo gaabinta qaabka magacii hore ee hoose. Fadlan la soco in kaliya isbeddelada lagu sameeyo magacyada, howlaha, iyo howlaha asalka ay ahaanayaan isku mid, markaa ha walwelin.
Tallaabada 8 – ODIN, eeg Dib u bilaw iyo F. Waqtiga dib u deji Kuwa la doortay. Sida loo Dib ucelinta xulashooyinka, HADAL KELIYA haddii aad dooratid faylka .PIT tallaabooyinka hore.
Halkaas ayay joogtaa. Samsung-kaaga Samsung J5 (2017) ayaa hadda loo cusboonaysiiyay casriyeynta qalabka loo yaqaan ‘Android Pie firmware’. Aad Xeerarka> Wixii taleefanka ku saabsan si aad u hubiso.
Isticmaalayaasha Samsung waxay kaloo kaydsan karaan xogta Samsung Smart Switch kombiyuutarkaaga. Intelligent Switch wuxuu ka caawiyaa wareejinta xogta guud ahaan aaladaha kala duwan ee Android, sida Samsung Galaxy S7 gurmad xogta Samsung Galaxy Q5 (2017).
Qaar ka mid ah tilmaamaha ikhtiyaariga ah ee aad u baahan tahay inaad xasuusato:
2. Hubso in qalabkaaga Android uu kugujiro batteri ilaa 80-85%. Tani waxay kaa caawin kartaa: Sida loo hubiyo boqolkiiba baatariga. Sabab? Sababtoo ah haddii taleefankaaga si lama filaan ah u xiro markaad rakibayso ROM gaar ah, rakibi muraayad rasmi ah ama aad ku rakibto mod, iwm. – Telefoonkaaga gacanta ayaa laga yaabaa inuu waxyeello ama si joogto ah u dhinto. Cidina ma rabto taas, sax?
3. Inta badan casharrada iyo sida loo hago kooxda Android waxaa loogu talagalay taleefanno gacmeedyo Android ah iyo kuwo kiniin ah. Waxaan kugula talineynaa inaadan tijaabin tusahayaga haddii taleefankaaga uu ku xiran yahay howl wadeenka, haddii aan go’aamineynin magaca ama nooca aaladda aaladda.
Taasi waa dhan! Sababta oo ah haddii aad dhib ku qabtid ama aad ku dhibban tahay tallaabooyinka, fadlan hubi inaad nala soo xiriirto jawaab-celin. Ma heshay xiriir go’an? Noo sheeg!